‘पाँच नम्बर टुक्र्याउन मिल्दैन, महन्थ ठाकुरहरुले मीर जाफरको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्’ - Pahilo News
‘पाँच नम्बर टुक्र्याउन मिल्दैन, महन्थ ठाकुरहरुले मीर जाफरको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्’
नवलपरासीबाट निर्वाचित सांसद वैजनाथ चौधरी प्रदेश नम्बर पाँचलाई अलग गर्ने प्रस्तावमा कुनै औचित्य नरहेको बताउँछन् । उक्त प्रस्तावलाई ‘भारतको इसारामा आएको’ बताउने उनी ‘केही मीर जाफरहरुका कारण देश ढुब्न लागेको’ सुनाउँछन् । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका चौधरीसँग पहिलो न्युज डटकमले गरेको कुराकानीः
० पछिल्लो समय संविधान संशोधनको विषयले निकै चर्चा पाएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो विना मौसमको वाजा हो । हामीले तीन चरणका निर्वाचन ०७४ माघ ७ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । निर्वाचन सम्पन्न भएमा मात्रै हामीले मुलुकलाई संविधान कार्यान्वयनको चरणमा लैजान सक्छौँ । त्यसैले अहिले सरकारले गर्नुपर्ने निर्वाचनको तयारी, निर्वाचनको घोषणा र त्यसका लागि आवश्यक ऐन–कानुन तर्जुमातिर जानु पर्ने हो । तर, अहिले सरकारले त्यसो गरिरहेको छैन । बरु उसले संविधान संशोधनको विषय उठाएर वेमौसमको बाजा बजाइरहेको छ । अहिलेको सरकार गर्नुपर्ने कामतिर भन्दा पनि गर्नु नहुने कामतिर बढी आकर्षित भएको छ । यो सकारात्मक कुरा होइन ।
० अहिले सबैभन्दा बढी विवाद प्रदेश नम्बर पाँचको सिमाना हेरफेर गर्ने विषयमा देखिएको छ । तपाईं त्यही क्षेत्रको जनप्रतिनिधि भएकाले के भन्नुहन्छ ?
प्रदेश नम्बर पाँच कुनै विवादित प्रदेश होइन । म अहिले यो प्रदेश हेरफेर गर्नुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ । यो प्रदेश नम्बर पाँचका जनताको पनि माग होइन । किन सरकारले यो काम गरिरहेको छ ? मैले पनि बुझेको छैन ।
अहिलेको विवाद भनेको झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको हो । संविधान जारी हुँदा पनि प्रदेश नम्बर पाँचका जनताले दीपावली गरेका हुन् । यस्तो प्रदेश किन हेरफेर गर्न खोजिदैँ छ ? प्रदेश नम्बर पाँचका कुनै पनि जनताले हामी प्रदेश नम्बर पाँचमा बस्दैनौँ भनेको मलाई थाहा छैन । त्यति मात्र होइन, अहिले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसका नेताहरु पनि प्रदेश नम्बर पाँच विभाजन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न । माओवादीका टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेसका चन्द्र भण्डारीलगायतले त संसद्मा ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने चेतावनी दिइसक्नुभएको छ । त्यसकारण पनि यो संशोधन प्रस्ताव सरकारले किन ल्यायो भन्ने सबैमा शंका पैदा भएको छ । अर्को ठाउँबाट दवावमा आएर प्रदेश नम्बर पाँचलाई विभाजन गर्ने कुरा हामीलाई मान्य हुँदैन । लाखौँ जनता अहिले सडकमै ओर्लिएर त्यसको विरोध गरिरहेकाले पनि यो उचित छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।
० यदि सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएन भने पारित हुने संभावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
मैले अघि पनि भनेँ– कांग्रेस–माओवादीकै नेताहरु अहिले संशोधनका विपक्षमा छन् । एमाले त अहिले होइन, पहिलादेखि नै त्यसको विरोधमा छ । केही साना दल पनि अहिले संशोधनको विरोधमा छन् । अनि कसरी पारित हुन्छ यो ? कुनै हालतमा पनि हुँदैन । त्यसैले सरकार अहिले नगर्ने काम गरेर देशलाई मुठभेडतिर लैजादैँछ ।
० अहिले एमालेले सरकारको कदमलाई ‘राष्ट्रघाती’ भनेर उत्तेनजना फैलाउन खोजेको छ भन्ने आरोप मधेस केन्द्रित दल र कांग्रेस छ नि ?
एमालेले औपचारिक रुपमै राष्ट्रघाती कदम भनेको छैन । तर, जुन ढंगले अहिले प्रदेश हेरफेर गर्ने काम भएको छ, त्यो गलत र अरुको इशारामा भएको छ भन्ने चाहीँ एमालेको ठहर हो । समृृद्धि र सामथ्र्यका हिसावले पनि प्रदेश नम्बर पाँच निकै उचित छ । यो प्रदेशलाई हेरफेर गर्नु हुँदैन भन्ने एमालेको मात्र होइन, त्यहाँको जनताको भावना हो । हिमालदेखि तराईसम्म मिलेर बसेको प्रदेश विभाजन गर्ने कुरा उचित छैन । हामीले भन्न खोजेको यही हो । अहिले पहाडबाट प्रदेश नम्बर पाँचलाई अलग गरेर थारु वा अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेश बनाउने भनेमा त्यो पनि सम्भव छैन । यो प्रस्ताव नै गलत छ ।
जहाँसम्म राष्ट्रघाती भन्ने सन्दर्भ छ, पहाडबाट तराई अलग गर्ने वित्तिकै राष्ट्रघात भयो भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ । यसो भन्यौँ भने प्रदेश नम्बर दुई त तराईसँग मात्र जोडिएको छ । त्यो राष्ट्रघाट भयो त भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यो त होइन न नि ? त्यो हामीले नै बनाएको हो । जातीय सद्भाव र समृद्धिका हिसावले चाहिँ गलत छ ।
० बाहिरको हात छ भनेर तपाईंले भारतप्रति इंगित गर्न खोज्नुभएको हो ?
मधेसी नेताहरुलाई भारतीय दूतावासमा बोलाएर दिइने ‘डिनर’ले त्यही कुराको संकेत गर्छ । त्यति मात्र होइन, भारतले गरेको अनावश्यक हस्तक्षेपले पनि त्यही कुराको संकेत गर्छ । यो हाम्रो देशका लागि दुर्भाग्य हो । हाम्रो आन्तरिक मामिला हामी आफैँले मिलाउने हो, अरु कसैले होइन । हामीले अरुलाई मिलाउन दियौँ भने समस्या हुन्छ ।
० तपाईँहरुका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘नेपालमा धेरै मीर जाफर जन्मिएका छन्’ भनेर के संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?
सिके राउत जस्ता व्यक्तिले तराई छुट्टै राज्य हो भन्दै खुल्मखुला नेपालमाथि धावा बोल्दै आएका छन् । उनीहरुलाई हामीले के भन्ने ? देशलाई नै अलग गर्नुपर्छ भन्ने सिके राउत प्रवृत्तिको हामीले खुलेर विरोध गर्नुपर्छ । अहिले मधेसी दलहरुमा पनि केही व्यक्ति मीर जाफर प्रवृत्तिका देखिएका छन् । नामै लिएर भन्दा महन्थ ठाकुरको अभिव्यक्तिले त्यस्तो देखाएको छ । उहाँले मधेस र पहाड अलग राष्ट्र हो भनेर अभिव्यक्ति दिनुलाई के भन्ने ? यसले देशलाई विखण्डन गर्छ । राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रि समृद्धिका लागि यो गलत कुरा हो । नेपाल बहुराष्ट्र होइन । यस्तो अभिव्यक्ति दिनेलाई राज्यले निर्मर भएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।